Maxkamadda ciidamada Qalabka oo bilaawday dhagaysida dacwada Dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxkamadda ciidamada Qalabka oo bilaawday dhagaysida dacwada Dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan
Waxaa saakay magaalada Muqdisho ka bilawday dhagaysiga Dacwada dilkii guddoomiyihii degmada Hodan, Waxayna Maxkamadda ciidamada Qalabka dhagaysanaysaa Ragii ku ku eedeysan dilkii guddoomiyihii degmada Hodan ee magaaladda Muqdisho Cabdixakiim Dhagajuun oo bishii Janaayo xilli habeen ah lagu dilay degmada Howlwadaag.
Wararka ayaa sheegaya in Markii ay bilaabatay dhagaysiga Dacwada ay soo xaadireen ehelada marxuum Cabdixakiim Dhagajuun, waxayna Saxaafada u sheegeen inay rajeynayaa in kiiskan uu caddaalad ku soo idlaado.
Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in ciidanka booliska ay masuul ka ahaayeen dilka guddoomiyihii degmada Hodan.
Sidoo kale Ciidanka u eedeysan kiiskan oo gaaraya ilaa sagaal askari waxaa ka mid ah taliyihii saldhigga booliska degmada howlwadaag Shuceyb Cabdulqaadir.
Previous articleShekh Shariif “ Farmaajo Haduusan yeeli Warka Wanaagsan ee ka soo yeerayo caalmak waxa uu Rabo waala Yaqaanaa
Next articleSaynisyahanno ka tırsan Jaamacadda Oxford ee UK oo sheegay in tijaabadii socotay Talaalka Duumada lagu gulestay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ay isaga kaashanayaan ka hortaga dambiyada la xiriira dhaqaalaha iyo...
Qasaare ka dhashay Qaraxii ka dhacay albaabka hore ee taliska...
Itoobiya oo ku eedeeyey dagaal yahanada la mamnuucay ee OLA weerarka...